Xarunta Alshahid ee Muqdisho oo lagusoo gaba-gabeeyay tababar Wariyayaal loo qabtay (Sawirro) | Shabakada Alshahid
Xarunta Alshahid ee Muqdisho oo lagusoo gaba-gabeeyay tababar Wariyayaal loo qabtay (Sawirro)
Added by Webmaster on October 25, 2012.
Saved under Faaqidaad, Horumar, Sawirada, Warar, Warbixin
Ustaad Cabdullahi Shuuke oo jeedinaya qaar ka mida Macluumaadkii Tababarka lagu qaatay
Mogadishu (Alshahid)-Waxaa lagusoo gaba-gabeeyay Hoolka Shirarka ee Xafiiska ay Muqdisho ku leedahay Xarunta Cilmi-baarista iyo Diraasaadka Warbaahinta ee Alshahid Tababar Laba maalmood soconayay oo Wariyayaal loo qabtay.
Ustaad Mohamed Hussein Cosoble oo Cashar ka jeedinaya Tababarka
Tababarka oo Shalay lasoo gaba-gabeeyay ayaa wuxuu furmay Maalintii Salaasada , waxaana kasoo qayb galay ku dhawaad 20 Wariye iyo shaqsiyaad kale oo dhaq-dhaqaaq muuqda ku dhex leh Saxaafadda Soomaalida.
Ku xigeenka maamulaha Xafiiska Alshahid ee Muqdisho Mudane Xassan Muudey Cabdullahi
Ku xigeenka maamulaha Alshahid ee Muqdisho Mudane Xassan Muudey Maxamed ayaa furitaanka Tababarkan wuxuu Shalay ka sheegay inay Xaruntiisu aad usoo dhawaynayso Wariyayaasha halkaas yimid. Isagoo farta ku fiiqay in Alshahid ay u taagantahay qabashada Tababaro iyo kulamo la isugu keenayo dadka u shaqeeya Bulshada si ay aragtiyadooda muhiimka ah isku dhaafsadaan.
Maamulaha Xafiiska Alshahid ee Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Maxamed oo gaba-gabadii Tababarka ka hadlaya
Intii uu Tababarku socday mudadii Labada maalin ahayd waxaa lagusoo bandhigayo Casharo muhiim u ahaa Cinwaanka uu Tababarku salka ku hayay ee ahaa horumarinta Xirfadaha loo adeegsado Tifaftirka Wararka Saxaafadda.
Tababarayaal iyo Khubaro Saxaafadeed ayaa Casharo iyo macluumaad muhiim u ahaa Cinwaanka Tababarka soo jeediyay. Dhankoodana ka qaybgalayaasha ayaa waxay iyaguna doodo wax ku ool ah iyo hadalo qiimo leh kasoo jeediyeen goobta uu Barnaamijku ka socday.
Tababarayaashii Casharada soo jeediyay waxaa ku jiray Ustaad Xassan Muudey Cabdullahi oo ah ku xigeenka maamulaha Xafiiska Alshahid ee Muqdisho sidoo kalena ah Khabiir mudo wax ka dhigayay Kuliyadaha Saxaafadda ee Jaamacadaha ku yaala dalka qaarkood.
Wariyayaashii Tababarka qaadanayay
Waxaa kale oo isagana Casharo soo jeediyay Ustaad Maxamed Xussein Cosoble oo Jaamacadda PLAZMA ee Muqdisho ku taala ka dhiga Cilmiga Saxaafadda. Wuxuuna Mr. Cosoble soo bandhigay Duruus ka hadlaysay sida loo sameeyo Wararka Daba-galka iyo Xaqiijinta ku saabsan ee ay Saxaafaddu waqtiyada qaar diyaariso.
Sidoo kale waxaa isna Macluumaad muuqaal watay oo aad loogu riyaaqay soo bandhigay Cabdullahi Shuuke oo dalka Masar kagasoo baxay Jaamacad Saxaafadeed, isagoo si gaar ah xoogga ugu saaray Macluumadka uu soo jeediyay sida loo sameeyo Muuqaalada iyo barnaamijyada Telefishinka laga tebiyo iyo qaababka ay tahay in loo sameeyo.
Ka qayb galayaasha Tababarka ayaa labadii maalin ee ay howshu socotay waxay muujiyeen dareen farxad leh oo ay ka qabaan howsha. Qaarkood oo Shabakada Wararka ee Alshahid la hadlayna waxay uga mahadceliyeen xarunta Alshahid soo qaban-qaabinta Tababarkan.
Hadal gaba-gabo ah waxaa ka jeediyay halkii uu Siminaarku ka socday maamulaha Xarunta Alshahid ee Somalia mudane Cabduraxman Maxamed oo isagu furitaanka Tababarka ka maqnaa balse gaba-gabayntiisa kusoo beegmay.
Mudane Cabdiraxmaan wuxuu hadalkiisa ugu mahadceliyay Tababarayaasha, Khubarada kale ee Macluumaadka soo jeedisay iyo dhamaan kasoo qaybgalayaashii Tababarka. Intaa ka dibna wuxuu Sharaxaad dheer ka bixiyay muhiimadda uu Tababarkani u leeyahay Saxaafadda iyo sida loogu baahi qabo in Wariyayaasha dalku ay helaan Tababaro dheeraad ah si ay u horumariyaan Xirfadooda.
Wuxuu tusaalooyin usoo qaatay waxyaabo uu kasoo bartay Siminaaro ceynkan ah oo uu dalal dibadda ah kaga qayb galay. Wuxuuna ku dhiirigaliyay Wariyayaasha Soomaalida inay yeeshaan dareen Wadaniyadeed, ayna xambaaraan Fariin ay dalkooda iyo dadkooda u sidaan taas oo ay tahay in lagu saleeyo howshooda.
Maamulaha Xafiiska Alshahid ee Muqdisho ayaa u ballan-qaaday Wariyayaashii ka qaybgalay Tababarka inay ka mid noqon doonaan asxaabta iyo dadka wada-shaqaynta joogtada ah la leh Xarunta Alshahid oo uu yiri waxay u baahantahay dad khibrad leh oo ay ka faa’ideysato una faa’ideyso.
Sida uu maamuluhu sheegayna Tababarkii iminka soo dhamaaday dadka ka qayb galay waxay muteysan doonaan Shahaadooyin ay Alshahid ugu tala gashay oo uu yiri dhawaan ayeey soo gaari doonaan dalka ka dib marka lagasoo Saxiixo laganasoo diyaariyo Xarumaha sare ee ay Alshahid ku leedahay Dibadda.
Jawi farxad iyo reyn-reyn wata ayuu kusoo dhamaaday Tababarkii, ka qaybgalayaasha iyo howl-wadeenka Alshihidna waxay ku kala tageen is-marxabeen iyo Tababaro kale oo loo balamay in hadii uu Waqtigu ogolaado la isugusoo noqon doono.
Xarunta Alshahid waxay caan ku tahay qabashada Tababarada loogu tala galay dhinacyada dhaq-dhaqaaqa xoogan ku leh bulshada oo Warfidiyeenka iyo hay’adaha Gargaarku ay ugu horeeyaan. Dhowr jeer oo horena waxaa Siminaaro iyo barnaamijyo ceynkaas ah la isugu keenay qaybo badan oo bulshada saamayn ku leh.
Waxaa kale oo Alshahid ay Siminaarada iyo kulamada Aqooneed ee ay qabato ay ka dhaxashaa Qoraalo Cilmiyeed oo aad u baaxad-wayn oo laga uruuriyo barnaamijyadaas iyo aragtiyada ay ka qaybgalayaashu is-dhaafsadaan si markaa ka dib loogu gudbiyo Bulsho-waynta iyo inta kari karta aqrinta Qoraaladaas oo ka faa’idaysanaya.